देशभक्त विप्लवलाई प्रतिबन्ध किन लगाएको भन्दै ओली-प्रचण्डमाथि खनिइन नायिका रेखा थापा — Sanchar Kendra
देशभक्त विप्लवलाई प्रतिबन्ध किन लगाएको भन्दै ओली-प्रचण्डमाथि खनिइन नायिका रेखा थापा
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लवकाे पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारकाे निर्णयकाे अभिनेत्री रेखा थापाले विराेध गरेकी छन् । अभिनेत्री थापाले याे निर्णयबाट देशमा द्वन्द्व निम्तिने बताएकी छन । सरकारले देशमा द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसप्रति आर्कोश समेत पाेखेकी छन्।
सामाजिक संजाल फेसबुक फ्यान पेज र एकाउन्टमा स्टाटस लेख्दै नायिका थापाले यसप्रति आक्रोश पाेखेकी छन् । ‘यो सरकार कसले चलाएको छ? जबरजस्ती युद्ध थोपर्न पो थाल्यो ! देशभक्त ‘बिप्लब’ माथी प्रतिबन्ध र सिके राउतलाई अंगालो हालेर नेपाली जनता तर्साउन खोजेको हो? ‘ भन्दै प्रशन समेत गरेकी छिन ।
सरकारले विप्लव नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्ध र सीके राउतसँग गरेको सहमतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नायिका थापाले यस्तो आरोप लगाएकी छन्। सरकारले यी दुई काम गरेर मुलुकमा जबर्जस्ती युद्ध थोपर्न खोजेको अभिनेत्री थापाको आरोप छ।
यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारद्वारा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाइएको प्रतिवन्धको विरोध गरेको छ । सरकारले मंगलबार बेलुकीबाट विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि कांग्रेस प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्माले विरोध गरेका हुन् ।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वरत तत्कालीन माओवादीलाई कांग्रेसले विश्वासमा लिएर शान्ति प्रक्रियाको बाटोमा डोराएको स्मरण गर्दै विप्लवलाई विश्वासमा ल्याउनका लागि सरकारसँग क्षमता नभएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘‘पहाड जत्रै उचाइ बनाइसकेको ‘त्यो माओवादी’ लाई विश्वासमा लिन सक्ने ‘त्यो नेतृत्व क्षमता’ कांग्रेस नेतृत्वले हिजो प्रस्तुत गरेको थियोे,’’ प्रवक्ता शर्माले ट्विट गर्दै भनेका छन्, ‘‘आज सानो आकार र आयतनको तर आफ्नै गोत्र बन्धुलाई विश्वासमा गाँसेर मूल बाटोमा ल्याउन सक्ने क्षमताको दुःखी अभाव देखियो ।’’
विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिवन्ध लगाएपछि प्रतिपक्षी दलसँगै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकर्तास्तरबाट पनि चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको सामाजिक संजालामा विरोध भइरहेको छ । प्रतिबन्दको समाचार संचारमाध्यमहरुमा आएसँगै टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । पूर्वमन्त्रीदेखि कलाकार, पत्रकार समेतले प्रतिबन्धले समस्या समाधान नहुने बताएका छन. ।
त्यसैगरी नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय महासचिव भुपेन्द्रजंग शाहिले विप्लवको पार्टिमाथी प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको बिरोध गरेका छन । नेपाली कांग्रेसको युवा संगठनका महासचिव शाहिले सरकारको उक्त कदमलाई मुर्खताको संज्ञा दिएका छन । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सरकार द्धन्द निम्त्याउन लागिपरेको आरोप लगाएका छन ।